အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအစိုးရ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့ အေအေ တောင်းဆို၊ ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုအတွက် ဆော်ဒီဘုရင်က အမေရိကန်ကို ဝမ်းနည်းစကားပြော သတင်းတွေအပါအဝင် မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအစ...
7 ธ.ค. 2562 - 10:02 น.
(၁) အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအစိုးရ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့ အေအေ တောင်းဆို
အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ သားသမီးနှစ်ဦးကို မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်မပို့ဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တောင်းဆိုနေပါတယ်
လက်ရှိမှာ စစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုဝင်တွေဟာ ထိုင်းမှာပဲ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပြီး ထိုင်းက ပြန်မလွှဲပေးသေးဘူးလို့ ခိုင်သုခက ပြောပါတယ်။ စစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို ထိုင်းဘက်ကနေ မြန်မာကို ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်မှာလွှဲပြောင်းဖို့လုပ်ထားပေမယ့် အစီအစဉ်ပျက်သွားတယ်လို့ မြန်မာဘက်က လက်ခံမယ့်အဖွဲ့မှာပါတဲ့ တာချီလိတ်မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်တင့်ကလည်း ပြောပါတယ်။
"စစ်ဘက်နဲ့ မပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကို ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာက လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ မိသားစုဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ အစိုးရဘက်မှာလည်း မိသားစုရှိတာပဲ။ သူတို့ ဘက်က ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကို ပစ်မှတ်ထားလာလို့ရှိရင်တော့ အဲဒီလိုလုပ်ရပ်တွေများလာရင်တော့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တင်းမာမှုတွေပိုများလာရင် မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်လာ နိုင်တယ်"
ဒီလို စစ်ဦးစီးချုပ်မိသားစုကို ဖမ်းထားတဲ့အတွက် အေအေဘက်က ဖမ်းထားတဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် အမှတ် ဦးဝှေ့တင်းအပါအဝင် ဓားစားခံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အလျော့အတင်းလုပ်ဖို့တော့ မရှိဘူးလို့ ဦးခိုင်သုခ က ပြောပါတယ်။
(၂) ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုအတွက် ဆော်ဒီဘုရင်က အမေရိကန်ကို ဝမ်းနည်းစကားပြော
သေနတ်သမားဟာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆော်ဒီပြည်သူတွေက ဒေါသထွက်နေတယ်။ ဒါဟာ ဆော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုမထင်ဟပ်ဘူး၊ ဆော်ဒီပြည်သူတွေက အမေရိကန်လူထုကို ချစ်ခင်တဲ့အကြောင်း ဆော်ဒီဘုရင်က ပြောတယ်လို့ သမ္မတ ထရမ့်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ သင်တန်းတက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ အဲဒီသေနတ်သမားပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူသုံးဦး သေဆုံး တာအပြင် နောက်ထပ် လူရှစ်ယောက်လည်း ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။
(၃) ကင်ညာမှာ ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ လူ ၆ ဦးသေ
ကင်ညာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာ လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက ဘတ်စ်ကားတစ်စီးကို ချောင်းမြောင်း တိုက်ခိုက်လို့ အနည်းဆုံး လူခြောက်ဦး သေဆုံး သွားပါတယ်။
ဆိုမာလီအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ အယ်လ်ရှာဘတ်က သူတို့လက်ချက်လို့ပြောပြီးတော့ အစိုးရအဖွဲ့က လူ ၁၀ ဦး သေသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နယ်စပ်ကိုဦးတည်သွားတဲ့ဘတ်စ်ကားကို လက်နက်ကိုင်တွေက ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီး ကင်ညာ နွယ်ဖွား ဆိုမာလီနိုင်ငံသား မဟုတ်တဲ့သူတွေကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မျက်မြင် သက်သေတွေက ပြောပါတယ်။
(၄) ဗြိတန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကွန်ဆာဗေးတစ်နဲ့ လေဘာပါတီခေါင်းဆောင်တွေ နောက်ဆုံးအကြိမ် စကားစစ်ထိုး
အခုရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာ မှန်းဆရခက်နေပါတယ်
ဗြိတိန်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာ ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်နဲ့ အတိုက်အခံ လေဘာပါတီခေါင်းဆောင် ဂျရမီကိုဘင်တို့ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ နောက်ဆုံး အကြိမ် စကားစစ်ထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
စကားစစ်ထိုးပွဲမှာ ပရိသတ်တွေက ဘရက်ဇစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးတဲ့အခါ လေဘာ ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဂျရမီကိုဘင်က ဥရောပသမဂ္ဂအီးယူကနေ ဗြိတိန်နုတ်ထွက်မယ့် ဘရက်ဇစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အီးယူနဲ့ သဘောတူညီချက်အသစ် ရအောင်လုပ်ပြီး လူထုကို ပြန်တင်ပြမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မစ္စတာဂျွန်ဆင်ကတော့ သူလုပ်ထားတဲ့ သဘောတူညီချက်အရ အီးယူကနေ နောက်လဆို ထွက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာ မှန်းဆရအလွန်ခက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့လည်း သတင်း ထောက်တွေက မှတ်ချက်ပေးနေကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အေအေစစ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့ဇနီးနဲ့ ကလေးနှစ်ဦးကို ထိုင်းအစိုးရ အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးဖို့ အေအေ တောင်းဆို၊ ဖလော်ရီဒါပစ်ခတ်မှုအတွက် ဆော်ဒီဘုရင်က အမေရိကန်ကို ဝမ်းနည်းစကားပြော သတင်းတွေအပါအဝင် မနက်ခင်းထိပ်တန်းသတင်းများ